Kangana Ranaut Oo Meel Iska Saartay Saif Ali Khan Iyo Shahid Kapoor - Hablaha Media Network
Kangana Ranaut Oo Meel Iska Saartay Saif Ali Khan Iyo Shahid Kapoor
HMN:- Kangana Ranaut ayaa ka hadashay qaabka loo xayeysiin doono filimka Rangoon kaasoo ay la hogaamineyso Saif Ali Khan iyo Shahid Kapoor, ka dib markii ay soo bexeen warar sheegaya in hogaamiyeyaasha filimkaan uu khilaaf xoogan u dhexeeyo.
Atariishada Rangoon ayaa daaha ka qaaday in kooxda iska leh filimkaan ay marka hore iyada u xilsaareen inay xayeysiiso, wixii intaas ka dambeeyana Saif Ali Khan iyo Shahid Kapoor ayaa kula soo biiri doona xayeysiinta filimkaan.
“Wuxuu ahaa go’aan cad oo kasoo baxay kooxda iska leh filimkaan oo uu ugu horreeyo Director Vishal Bhardwaj. Aniga ayaa marka hore filimka xayeysiin doona ka dibna wiilasha Saif Ali Khan iyo Shahid Kapoor ayaa xayeysiinta filimkaan xilli dambe igula soo biiri doona”. Ayey saxaafadda u sheegtay 29 sanno jirtaani.
Warar dheeraad ah ayaa sheegaya in seddaxdooda siyaabo kala duwan lacag loo siiyey si ay xayeysiin ugu sameeyaan filimkaan oo soo bixi doona 24ka bishaan Febraao 2017ka.